Tronsmart स्टूडियो वायरलेस स्पिकर, विश्लेषण र प्रदर्शन | ग्याजेट समाचार
Tronsmart स्टूडियो वायरलेस स्पिकर, विश्लेषण र प्रदर्शन
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 02/11/2021 20:00 | सामान्य
हामी तपाईलाई एउटा नयाँ समीक्षा ल्याउँछौं जसमा ध्वनि र संगीत मुख्य पात्र हुन्। जसमा समीक्षा ट्रान्समार्टएक पटक फेरि, उहाँ हामीलाई आफ्नो विस्तृत सूचीमा थप्न उत्पादन ल्याउन आउनुहुन्छ। आज हामी प्रस्तुत गर्दछौं Tronsmart स्टूडियो वायरलेस स्पिकर, धेरै प्रस्ताव गर्न को लागी एक शक्तिशाली र कम्प्याक्ट स्पिकर।
यदि तपाईं पूर्ण भोल्युममा संगीतको आनन्द लिने मध्ये एक हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईं पनि स्वीकृत आवाज संग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने। र यदि यो तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको स्पिकरको स्वायत्तता तपाईंसँग रहन सक्षम छ, ट्रन्समार्ट स्टुडियो तपाईंले खोजिरहनु भएको स्पिकर हुन सक्छ।
1 Tronsmart स्टुडियो वायरलेस स्पिकर, तपाईलाई के चाहिन्छ
2 Tronsmart स्टुडियो वायरलेस स्पिकर को डिजाइन
3 Tronsmart Studio को साथमा अत्याधुनिक प्रविधि
4 विशिष्टता तालिका
5 Tronsmart स्टुडियो स्पिकर को लाभ र विपक्ष
Tronsmart स्टुडियो वायरलेस स्पिकर, तपाईलाई के चाहिन्छ
हामीले Actualidad ग्याजेटमा ठूलो संख्यामा ध्वनिसँग सम्बन्धित स्पिकर र सामानहरू परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं। पक्कै, एक ब्लुटुथ स्पिकर यो एक सहायक छ हाम्रो संगीतको आनन्द लिनको लागि आदर्श सबैभन्दा सहज तरिकामा मनपर्ने। हाम्रो स्मार्टफोन जडान गर्नुहोस्, उपयुक्त प्लेलिस्ट चयन गर्नुहोस्, र यो हो।
तर सबै वक्ताहरूले यस्तो स्तर प्रस्ताव गर्दैनन् यस्तो कम्प्याक्ट साइज र ढाँचामा ध्वनि गुणस्तर र शक्ति। घरमा ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ, तर पोर्टेबिलिटीलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ जो आफ्नो संगीत जहाँ गए पनि लिन चाहन्छन् र यसलाई हामीले मनपर्ने तरिकाले सुनाउँछन्।
ट्रन्समार्ट स्टुडियो वायरलेस स्पिकरले बजारमा पूर्णांकहरू जित्यो धन्यवाद यसको मूल्य र सबै लाभ बीच ठूलो सन्तुलन हासिल त्यो प्रस्ताव गर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको कार्यालय, तपाइँको घर वा उत्तम उपहार बनाउन को लागी एक स्पिकर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, धेरै कारणहरु को लागी यो एक उच्च सिफारिश विकल्प हुन्छ। यहाँ तपाईं अब किन्न सक्नुहुन्छ Tronsmart स्टुडियो तपाईले सोचे भन्दा कमको लागि।
Tronsmart स्टुडियो वायरलेस स्पिकर को डिजाइन
यो सत्य हो बजारमा स्पिकरहरू छन् जहाँ डिजाइनले आँखा समात्छ नाङ्गो आँखा। स्पिकरहरूले कार्यात्मक प्राविधिक उपकरणहरूको रूपमा भन्दा सजावटी तत्वहरूको रूपमा सिर्जना गरे। Tronsmart Studio वायरलेस स्पिकर हो लाउडस्पीकर जस्तो देखिने स्पिकर साँच्चै, र सबै भन्दा माथि, एक वास्तविक वक्ता जस्तै आवाज.
हामीले भेट्टायौं आयताकार आकार संग क्लासिक डिजाइन, सीधा रेखा र कालो रंग। एक वक्ता संग डेस्कटप ढाँचा जुन कुनै पनि वातावरणमा पूर्ण रूपमा फिट हुनेछ। र यसले हामीलाई पुरानो स्टुडियो स्पिकरहरूको सम्झना दिलाउँछ तर कालो रंग र यसको निर्माणको लागि प्रयोग गरिएको सामग्रीको लागि आधुनिकताको सानो स्पर्शको साथ।
यो छ कडा एल्युमिनियम चेसिस कि, तपाईंलाई एक सुरुचिपूर्ण छवि प्रदान गर्न को लागी, बनाउँछ उच्च निष्ठा संग कुनै हानि छैन। सुन्ने अनुभवलाई साँच्चै सन्तोषजनक बनाउने कुरा।
यसलाई समात्नुहोस् Tronsmart स्टुडियो उत्तम मूल्यमा अमेजनमा
मा माथि हामीले भेट्टायौं बटन नियन्त्रण पूर्ण रूपमा केन्द्रित रबर प्यानलमा। हामीसँग बटन छ शक्ति, उठाउन र कम गर्न भोल्युम प्रजनन को, प्ले / पज गर्नुहोस्। को लागि बटन पनि छ ब्लुटुथ द्वारा लिङ्क हाम्रो स्मार्टफोन वा कम्प्युटरको साथ। र केहि थप बटनहरू जसले गर्नेछ, एउटा हाम्रो आह्वान गर्न आवाज सहायक, र अर्को सक्रिय गर्न को लागी ध्वनि पल्स प्रविधि हामी अर्को कुरा गर्नेछौं जसको बारेमा।
मा तल हामीले एउटा भेट्टायौं समर्थन आधार पनि रबर बनेको छ। यन्त्र पूर्ण रूपमा यसमा रहन्छ, धेरै सुरुचिपूर्ण तरिकामा थोरै माथि रहन्छ। यो रबर पनि एक विरोधी पर्ची रूपमा कार्य गर्दछ। र सबै भन्दा माथि सम्भावित कम्पनहरूबाट बच्न हामी उच्च भोल्युम प्रयोग गर्दा तालिकाको सम्पर्कमा।
मा पछाडि हामीले भेट्टायौं लोड पोर्ट, ढाँचा संग USB प्रकार सी, जसले फास्ट चार्जिङलाई सपोर्ट गर्छ। साथै ए 3,5mm ज्याक इनपुट ब्लुटुथ बिना केहि उपकरण जडान गर्न। र एक माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड स्लट जहाँ हामी ब्लुटुथ वा केबल बिना प्लेब्याकको लागि, हामीले चाहेको सबै संगीत थप्न सक्छौं।
Tronsmart Studio को साथमा अत्याधुनिक प्रविधि
जब हामी स्पिकर किन्ने बारे सोच्दछौं, यसले डेलिभर गर्न सक्ने शक्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र यो सामान्यतया हामीले पहिले हेरेका चीजहरू मध्ये एक हो। तर यो शक्ति अक्सर ध्वनि गुणस्तर संग मतभेद मा छ। यसैले यो जान्न आवश्यक छ कि Tronsmart ले ईमानदारीपूर्वक काम गरेको छ ताकि यो सानो स्पिकर प्रस्ताव गर्न सक्षम छ। पावर 30 वाट भन्दा कम छैन र कि तिनीहरूaसंग आवाज साँच्चै अचम्मको गुणस्तर.
विशेष ध्वनि पल्स प्रविधि यो सुन्ने अनुभव बृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको छ। ए प्रदान गर्दछ विरूपण-मुक्त ध्वनि आउटपुट भोल्युमको पर्वाह नगरी। ट्रन्समार्ट स्टुडियो पनि सुरु गर्ने फर्म मध्ये पहिलो हो TuneConn प्रविधि, जसको लागि धन्यवाद हामी एकै समयमा 100 स्पिकरहरू वायरलेस रूपमा एउटै उपकरणमा लिङ्क गर्न सक्छौं… पागल। अब तपाईं आफ्नो किन्न सक्नुहुन्छ Tronsmart स्टुडियो अमेजनमा नि: शुल्क शिपिंगको साथ।
El 2.1 च्यानलहरूको साथ गतिशील ध्वनि बेवास्ता गर्दैन। लाई धन्यवाद tronsmart एप तपाईं विभिन्न पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङहरू, अनुकूलन, समानीकरण र तपाईंले कल्पना गर्न सक्ने सबै अडियो प्रभावहरू। एप्लिकेसनको प्रयोगको अनुभवले गुणस्तर र ध्वनिमा लाभ लिन्छ जुन तपाईले सधैं चाहनु भएको छ।
विकासकर्ता: Geekbuy Inc।
La स्वायत्तता यो स्टुडियो वायरल स्पिकर को एक बलियो बिन्दु पनि हो। तपाईलाई धन्यवाद दुई 2000 mAh ब्याट्री राख्न सक्षम छ 15 घण्टासम्म निर्बाध प्लेब्याक। छिटो चार्ज गर्ने प्रविधिको कारण ब्याट्रीहरू मात्र तीन घण्टामा 100% हुन सक्छन्।
पनि हाइलाइट गर्दछ जलरोधक तपाईलाई धन्यवाद छ IPX4 प्रमाणीकरण। यद्यपि यसको डिजाइन र आकारको लागि प्राथमिकता यसलाई इनडोर स्पिकर मान्न सकिन्छ। यसको सामग्री र तिनीहरूको प्रतिरोधले यसलाई बाहिरी प्रयोगको लागि उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ।
Tronsmart Studio लाउडस्पीकर सुसज्जित छ 1 कम आवृत्ति केन्द्र subwoofer,4निष्क्रिय स्पिकरहरू गहिरो बास र शक्ति प्रदान गर्दै, र2उच्च आवृत्ति ट्वीटरहरू। बजारमा केही स्पिकरहरू जुन यस मूल्य दायरामा सार्न सक्छन्, यो जस्तो केहि प्रस्ताव गर्न सक्षम हुनेछन्।
मोडेल स्टुडियो वायरलेस स्पिकर
कनेक्टिविटी ब्लुटुथ ५.० + ३.५ + माइक्रो एसडी ज्याक
फ्रिक्वेन्सी दायरा H० हर्ट्ज - ,20००० हर्ट्ज
ब्याट्री २ x m० mAh
स्वायत्तता 15 घण्टा सम्म
चार्ज समय - - hours घण्टा
आयामहरू 206.5 x 70 x 58 मिमी
वजन 0.961 किलो
लि link्क खरीद गर्नुहोस् Tronsmart स्टुडियो
मूल्य 79.99 €
Tronsmart स्टुडियो स्पिकर को लाभ र विपक्ष
TuneConn प्रविधि एकल यन्त्रमा १०० स्पिकरहरू सम्म लिङ्क गर्न।
30W पावर यस्तो कम्प्याक्ट उपकरणमा।
Hours० घण्टाको स्वायत्तता एकल चार्जमा।
ध्वनि गुणस्तर कुनै पनि भोल्युममा कुनै विकृति छैन।
Tule Conn टेक्नोलोजी
El धातु चेसिस यो पतन द्वारा दाँत वा विकृत हुन सक्छ।
उच्च तौल de लगभग 1 किलो
Tronsmart स्टूडियो वायरलेस स्पिकर
मा पोष्ट गरिएको:2को नोभेम्बर 2021
अन्तिम संशोधन:2को नोभेम्बर 2021
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Tronsmart स्टूडियो वायरलेस स्पिकर, विश्लेषण र प्रदर्शन
Amazon Fire TV Stick Max, अब WiFi6र HDR सँग
Ugreen, हाम्रो उपकरणहरूको लागि विभिन्न सामानहरू